मृ त अवस्थामा फेला परेका एसएसपी यादव कस्ता थिए ? उनको मृत्युको खबरले आफन्त चकित् « Gaunbeshi
मृ त अवस्थामा फेला परेका एसएसपी यादव कस्ता थिए ? उनको मृत्युको खबरले आफन्त चकित्
काठमाडौ । केही दिन अघि कारवाहीमा परेका नेपाल प्रहरीका एसएसपी विहिवार सरकारी निवासमा मृ त फेला परे । नेपाल प्रहरीका एसएसपी रहेका सुशीलकुमार यादव नवलपरासीका स्थायी बासिन्दा हुन् । सानैदेखि शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिने उनी मामा ध्रुवबहादुर प्रधानको प्रेरणाले प्रहरीमा भर्ती भएका थिए ।
‘अरुलाई खुशी बनाउन हाँसीठट्टा गरिरहने उहाँ पी डा थेग्नै नसक्ने खालको हुनुहुन्थ्यो ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने । आफ्नो ब्याचीका अधिकृतहरु एआइजी र डिआइजी भइसक्दा आफू भने एसएसपीमै सेवानिवृत्त हुनुपर्ने अवस्था बन्दा भने यादव चिन्तित हुनेगरेको निकट स्रोतले भन्यो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान बढाइरहेको छ । उनी कारवाहीमा परेको बताइएको छ । तर के कारणले हो भन्ने खुलेको छैन ।
जहाँ खटिएर गयो त्यहाँ जिमको सामान साथमा लान्थे । कतिपय ठाउँमा जिमशाला पनि बनाउँथे ।यादव हसिला थिए । हाँस्नुपर्ने र हसाउनुपर्ने उनको स्वभाव थियो । हाँसीमज्जा गरिरहनुपर्ने यादव झु ण्डि एको अवस्थामा फेला पर्दा नजिकबाट चिन्नेहरु पत्याउन सकिरहेका छैनन् ।